ILithuania neKazakhstan zizokwethula insiza yezindiza yabagibeli ngqo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » ILithuania neKazakhstan zizokwethula insiza yezindiza yabagibeli ngqo
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba ZaseKazakhstan • Izindaba ZaseLithuania • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
ILithuania neKazakhstan zizokwethula insiza yezindiza yabagibeli ngqo.
Isinqumo sokugcina ezindizeni ezijwayelekile sizokwenziwa ngemuva kokuthi zombili iziphathimandla zinikezwe isaziso sokuhlanza indiza ngamakhomishini akhethekile aqaphe isimo se-COVID-19 kuwo womabili la mazwe.
Izindiza zeNur-Sultan eziya eVilnius nase-Almaty eziya eVilnius zizokwethulwa ekuqaleni kuka-2022.
I-Wizz Air yaseHungary izosebenza ngezindiza ezihleliwe eziqondile phakathi kweKazakhstan neLithuania.
Izikhulu zezindiza zaseKazakhstan nezaseLithuania zisayine iProtocol Yenhloso yokwenza izindiza ezijwayelekile.
Ngokwenkonzo yabezindaba yoMnyango Wezimboni Nokuthuthukiswa Kwezingqalasizinda zeRiphabhuliki yaseKazakhstan, kuzokwethulwa izindiza eziqondile zabagibeli phakathi kweKazakhstan neLithuania ezinyangeni ezimbalwa.
Izindiza ezihleliwe zeNur-Sultan-Vilnius ne-Almaty-Vilnius kulindeleke ukuthi ziqale ekuqaleni kuka-2022.
IKomiti Yezokundiza Yomphakathi yaseKazakhstan kanye nabamele iLithuanian Civil Aviation babambe izingxoxo enhlokodolobha yaseKazakh, iNur-Sultan, namuhla ukudingida ngokwethulwa kwezindiza ezimbili ezijwayelekile.
Kwavunyelwana ukuthi okwaseHungary Wizz Air izosebenza lezo zindiza.
Ngokusho the UMnyango Wezezimboni Nokuthuthukiswa Kwezingqalasizinda inkonzo yabezindaba, izindiza zizoqala ngokwethembeka kwikota yokuqala ka-2022.
Njengengxenye yezingxoxo, abaphathi bezindiza baseLithuania nabaseKazakh baxoxe ngezinkinga zokubambisana emkhakheni wezokuhamba ngezindiza base beshintsha iSivumelwano Esisayiniwe senhloso ukwenza izindiza ezijwayelekile.
I-St. Kitts & Nevis Yenqaba Ukungena Kubahambi abavela ...
Ama-33% abantu baseMelika abangagonyiwe bathi abasoze bathola ...